Zeorzia: Fodian’ireo Tiorka Meskhetian · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2012 0:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, Ελληνικά, Nederlands, Italiano, Català, English
Ny fampodiana ireo Tiorka Meskhetian avy ao Azerbaijan,Rosia sy Azia Afovoany ho any Zeorzia, dia tsy ho lohalaharana fotsiny ho an'ny governemanta Zeorziana, fa koa adidy iray tsy maintsy tanterahana manoloanany Filankevitry Eraopa hatramin'ny naha-mpikambana azy tamin'ny taona 1999. Olona maherin'ny 100.000 no nailik'i Stalin tamin'ny 1944 avy ao amin'ny faritra Meskheti ao Zeorzia, isan'izy ireny ny Hemshin (Silamo Armeniana), Kiorda ary ny Karapapakhs.Ny vondrona tena be indrindra tamin'ireo nakisaka ireo dia ny Tiorka Meskhetian.
Raha kely indrindra dia 400.000 ireo Tiorka Meskhetian miaina ivelan'i Zoerzia ankehitriny, ary tsy fantatra mazava aza hoe firy no mety hiverina ao anatin'ity dingana iray izay tokony ho efa nikatona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona lasa ity, saingy mety mbola hohalavaina. Io no antony iray anatin'ny maro nahatonga ilay dingana fampodiana ho nitarazoka be, indrindra indrindra fa ireo Armeniana teratany izao no tena manome ny ampahany be indrindra amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra, izay i Samtskhe-Javakheti amin'izao fotoana. Vokatr'izany, mba tsy hampihenjana ny fifandraisan'ny foko isan'isany, ny governemanta Zeorziana dia mametraka ireo Tiorka Meskhetian manerana ny firenena.
Tsy ela akory izay ny East of Center dia nikitika ny maha-saropady ny manodidina ilay olana :
Noho ny hagaigen'i Stalin, silamo an-tapitrisa sy mpikambana maro samihafa avy amin'ireo vondron'olona tsy Slave tao amin'ny Firaisana Sovietika no nakisaka an-keriny ho any Azia Afovoany nandritra ny taona 30 sy 40. Henjana ny mieritreritra ny fijaliana isak'izay mihetsika zakain'ireny vondrom-piarahamonina ireny sy tsy noraharahain'izao tontolo izao toy ny Tiorka Meskhetian. […]
Mazava be, na izany aza, fa tsy vitan'i Zeorzia ny hamerina vahoaka be tahaka izany manerana ny faritry ny taniny, indrindra moa fa hoe any amin'ny faritr'i Samtskhe-Javakheti izay tsy dia mivoatra loatra, faritra izay niavian'ireo Meskhetian fahiny. Ary mbola eo koa ny resaka Armeniana, sy ny fihetseham-po tsy tia Silamo mbola manjaka be. […]
Salim Khamdiv avy ao an-tanànan'i Abastumani. 14 taona i Khamdiv fony nitranga ny fanisahana© Temo Bardzimashvili
Kanefa, tao anatin'ny roa taona fisoratana anarana izay nifarana tamin'ny Jolay 2010, tsy nisy afa-tsy 5.841 monja ireo antontan-taratasy fangatahana azo ekena voarain'ny governemanta Zeorziana araka ny nambaran'ny Foibe Eraopeana Misahana Ny Olan'ireo Vitsy An'isa, na ny European Center for Minority Issues (ECMI). Io dia mahakasika olona eo amin'ny 9.350. Ahıska Türkleri – Ahıskalılar dia manazava izay tena antenain'ireo Tiorka Meskhetian:
Te-hiverina amin'ny taninay izay nanesorana anay tsy an-drariny izahay. Hatramin'ny androany, dia any aminà faritra 2000 samihafa anaty firenena 9 samihafa, ka isan'izany i Etazonia, no misy anay. Sahirana be izahay vao mahazo zom-pirenena, fahazoan-dàlana hipetraka sy hiasa any amin'ireny firenena iainanay ireny. An-dalam-panjavonana ny kolontsaina sy ny fiteninay. Te-hiverina any amin'ny firenenay toy ny olom-pirenena Zeorziana izahay ary hiaina eo amin'ny taninay manomboka izao.
Osman Mekhriev (ankavia) sy Islam Niazov, zokiolon'ny vondrom-piarahamonina Abastumani Meskhetian, naka aina nandritra ny fialan-tsasatry ny fivavahana famaranana ny ramadany © Temo Bardzimashvili
Tamin'ny taona lasa, ny bilaogin'i Zaka Guluyev dia nanome antsipirihany ny toe-draharaha misy ny sasany amin’ ireo izay niverina nody, avy any Azerbaijan ny ankabeazany, ho any Samtskhe-Javakheti:
Muslim Arifov sy ny fianakaviany dia niverina ho ao Akhiltskhe telo taona lasa izay, avy any Saatly, toerana namindràna azy ireo ao Azerbaijan. Miteny i Arifov fa ankehitriny izy dia mahatsapa hafaliana tafody sy miaina eo amin'ny Zeorzia tanindrazany . “Nesorina tsy an-drariny teto amin'ity faritra ity ireo ray aman-dreniko. Ankehitriny aho dia faly fa afaka niverina ary miaina eto amin'ny taniko Zeorzia miaraka amin'ny fianakaviako.”
Roa volana lasa izay dia nanapa-kevitra koa i Mehemmed Rehimov, havana silamo, fa hody miaraka amin'ny fianakaviany avy any Azerbaijan ka honina any Akhlstkhe tanindrazany . Mehemmed Rehimov dia miteny fa tahaka ny tsara honenana kokoa i Zeorzia. “Fahatsapana tsara ery izany hoe miaina eto Zeorzia tanindrazako izany. Roa volana sahady izay no lasa taorian'ny niverenako ho eto Zeorzia. Faly aho eto miaraka amin'ny fianakaviako ary tena mahatsiaro ho sambatra izaho manokana”.
Ismayil Moidze, filoha mitarika ny fiarahamonina [Tiorka Vatan Zeorziana Axhiska] miteny fa ny fikambanan-dry zareo dia niandràndra olona marobe hisoratra anarana hiverina. Saingy manazava izy fa marobe ny fianakaviana nandà ny hisoratra satria […] maro ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana [ho] fahazoana ny satan'ny maha-olona nampodiana any Zeorzia. […] Izany no antony nanapahan'ny fianakaviana maro hevitra hijanona any amin'ny toerana misy azy ireo”.
Rana Rajabova, tovovavy iray 24 taona, hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana, ao an-tanànan'ireo Azerbaijani ao Shirinbeili. Ny ray aman-dreniben'i Rana, teraka tao amin'ny tanànan'i Arali , faritra Adigeni ao Zeorzia, dia nakisaka tany Uzbekistan. Talohan'ny fanisahana dia nilazàn'ny miaramila ry zareo fa hampodiana afaka 7 andro, noho izany dia tsy misy tokony hitondràna entana. Nafenin-drenibeny daholo ireo firavaka volamenany tao an-trano niaraka tamin'ny fanantenany fa hiverina afaka herinandro. Ny fianakavian'i Rana dia isan'ny nisoratra anarana hiverina ary miteny fa ry zareo dia tsy maniry ny ho "mpitsoa-ponenana." © Temo Bardzimashvili
Ny Georgian Youth | Multiculturality | New Challenges , na Tanora | Kolontsaina marolafy | Fanamby vaovao dia liana amin'ny fijerena fomba hampidirana an'ireo vao tonga ho ao anivon'ny fiarahamonina indray:
Ao Samstkhe-Javakheti, ny fikambanam-paritra “Toleranti” dia manome toro-hevitra mikasika ny lalàna ho an'ireo fianakaviana Meskhetians nampodiana, fiahiana ara-pahasalamàna ary fanohanana amin'ny fiteny. Ao anatin'ny fandaharany amin'ny tetikasany mandritra ny 3 taona “Fanomezana fiahiana araka ny maha-olombelona ho an'ireo Meskhs nampodiana sy fiomanana amin'ny “fidoana an-tsitrapo”, dia tena mikarakara fampianarana indroa isan-kerinandro ho an'ireo kilonga Meskhetians nampodiana tokoa ilay fikambanana. Ireo tanora manatrika ireny kilasy ireny dia manantena ny hampitombo ny vintany ho tafita any an-tsekoly, toerana izay andraisan'izy ireo izany amin'ny teny Zeorziana, sy hanamafy ny fitsofohany ho eny anivon'ny fiarahamonina.
Raha raisina amin'ny fahavitrihan-dry zareo mianatra ny Zeorziana, ary faran'izay haingana azo atao, dia 100% ny fahombiazan'izay fitsofohana izay.
Toy ireo maro hafa anefa, dia zavatra iray no manakana azy ireo tsy hahatsiaro tanteraka ho toy ny eo amin'ny taniny ao Zeorzia : mbola miandry valinteny ry zareo mikasika ny fangatahany hahazo ny zom-pirenena Zeorziana, izay efa nalefan-dry zareo roa taona lasa izay. Rehefa tsy misy zom-pirenena dia tsy olom-pirenena feno ao Zeorzia ry zareo, ary noho izany dia miady ny ho afaka hahazo ireo filàna fototra toy ny fiahiana ara-pahasalamana. Tsy manan-tsafidy ry zareo, na izany aza : tahaka ny hafa ihany, tsy maintsy miandry […] – izany dia midika fiainana tsy azo antoka mandritra ny fotoana maharitra…
Sariben'i Abdullah Gamidov, ny vadiny Khalida, ary Zia Chumidze, rain-dramatoa, mihahaka eo amin'ny latabatra fanaovana lalaon-tsaina Echec ao an-tranon'i Gamidov ao Kant, Kyrgystan. Zia Chumidze dia niady tany ambava-ady ary tsy niverina an-trano intsony mihitsy rehefa nitranga ny fanisahana. © Temo Bardzimashvili
Ny bilaogy Where's Keith dia maneho hevitra momba ny asan'ilay mpanao gazety sady mpaka sary Temo Bardzimashvili, izay nanadihady ny fiverenan'ireo Tiorka Meskhetian ho any Zeorzia hatramin'ny fiainan-dry zareo tany Azerbaijan, Kyrgyzstan sy Tiorkia. Ny sasany amin'ireo asan'i Bardzimashvili, “Ilay Tany Tsy Nampanantenaina – Ny Dia Lavitr'ezak'ireo Meskhetians Hody,” dia naseho tao Tbilisi, notohanan'ny Foibe Eraopeana Misahana ny Olan'Ireo Vitsy An'isa (ECMI), ary mampanaraka io lahatsoratra io amin'ny fanomezan-dàlana avy aminy.
Delizia Flaccavento koa dia nampakatra sarin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpitsoa-ponenana Meskhetian any Buffalo, New York, tahaka izay ataon'ireo Tiorka Meskhetian Mpitsoa-ponenana ao Atlanta, Zeorzia (Etazonia). Mandritra izany ny ECMI dia miteny fa misy “filàna iray lehibe […] hampitomboana ny fahatsiarovan-tenan'ny besinimaro momba ny zon'ireo olona nakisaka ireo hiverina sy ny dingan'ny arahana amin'ny fampodiana […], indrindra fa amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao sy ny rafi-pampianarana.”